Myanmar IT Resource Forum » WEB DEVELOPERS ZONE » » Other Web Developing Technology » ning.com လုပ်ကြရအောင်
1 ning.com လုပ်ကြရအောင် on 2nd November 2009, 3:43 pm
ကျနာ် ဒီပိုစ်ကို မတင်ခင် အရင်ပြောပါရစေ ခင်ဗျာ(ကြေငြာတာ မဟုတ်ပါ)
ကျနေ်ာ MCO ရေးပါတယ် Phannantaw နဲ့ပါ
ပြီးတော့ myanmargalaxy မှာ လမ်းပြကြယ် နဲ့ ရေးပါတယ်
ပြီးတော့ forverfriends.ning.com မှာ Forever နာမည်နဲ့ ရေးပါတယ်
မှာ ဒိနေ့ပဲ တင်ပြီးပါပြီ
အခု ကျနေ်ာ ဒီဖိုရမ်မှာ ပြန်တင်ပါတယ်
ကျနေ်ာဖိုရမ်ကို အရင်တင်မလို့ပါပဲ အခြေနေကြောင့် ဟိုဘက်မှာ သွားတင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်
ဖတ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ
Ning.com လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ကျနေ်ာသိသလောက်လေး ပူံနဲက တကွ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကို Add ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ Ning.com လုပ်ကြရအောင်
ကို Mozilla က နေ ၀င်လိုက်ပါ
E mail Address နဲ့ Password ကို ရေးသွင်းပြီး
Sign in ကို နှိပ်ပါ
ကျနေ်ာက Foreverfriends .ning.com ၀င်တုန်းက လိပ်စာနဲ့ဝင်တော့ဒီလိုပေါ်လာပါတယ်
တကယ်လို့ gmails. လိပ်စာက Foreverfriends .ning.com ၀င်တုန်းက လိပ်စာမဟုတ်ခဲ့ရင် ဒီလိုတန်းပေါ်ပါတယ်
အခုလုပ်မဲ့ နာမည်ကို ကျနေ်ာရေးထားသလို နာမည်တစ်ခုခု ပေးလိုက်ပြီး Create လုပ်ပါ
နိုင်ငံ နဲ့ မြိုတော် ကို လောက်တော့ ဖြည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Next ပေါ့
Last edited by kohtet on 2nd November 2009, 9:26 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : link များအား code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်။)
2 Ning.com လုပ်ပုံလုပ်နည်း(2) on 2nd November 2009, 3:48 pm
ပြီးရင် အောက်က ပုံအတိုင်းဆက်ပေါ်ပါမယ်
Features ကိုတော့ ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဦး
ထူးခြားတာတော့ ဘာမှမရှိပါဘူး (လေ့လာကြည့်ပါ)
အခု ကျနေ်ာဝိုင်းထားတဲ့ Appearance ကို ဆက်ပြီး ကလစ်လိုက်ပါ
အဲးပြီရင်တော့ Appearance box ပေါ်လာပါမယ်(ပုံပါအတိုင်း)
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Theme ကို ရွေးပါ
ကျန်တာတော့ အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး ခင်ဗျာ
ေ၇ွှးပြီးရင်တော့ Launch ကို နှိပ်ပါ
ကျနေ်ာတော့ Biomatic Tangerine Theme ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်
ning.com တစ်ခု လုပ်ပြီးသွားပါပြီ
ကျနေ်ာကတော့ နာမည်မှာ Forever နဲ့ ပြန်လုပ်ထားပါတယ် ပုံလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ
လိပ်စာကတော့ ကျနေ်ာအခုလုပ်လိုက်တဲ့ ဒိလိပ်စာလေးပါ [You must be registered and logged in to see this link.]( ကျနေ်ာ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်)
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ အစဉ်မပြေတာရှိ မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်
Last edited by kohtet on 2nd November 2009, 9:24 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : link အား code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်။)
3 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 2nd November 2009, 5:55 pm
ကျနော်ကတော့ ning လုပ်မယ့်သူတွေထက် ဖိုရမ်လုပ်တာကို ပိုအားပေးတယ်။ ning ကို တစ်ချို့ဆိုက်ဘာတွေက ပိတ်တယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမကောင်းတဲ့ အချက်က loading time ပါပဲ။ loading time ကလည်း ကိုယ်က ဘာ flash မှမထည့်ဘဲနေတာတောင် လူများလာတာနဲ့ ဆိုဒ်ကလေးတော့တာပါပဲ။ photo တစ်ခုကြည့်မယ် song တစ်ပုဒ်နားထောင်မယ်ဆိုတာတောင် ဒီက ကွန်နက်ရှင်နဲ့ တော်တော်လေးကြာပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းမှ သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ တော်ရုံကွန်နက်ရှင်နဲ့ကတော့ Reply လေးတစ်ခုပြန်တာတောင် တစ်နာရီထိုင်စောင့်လိုက်ရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျနော် ကိုET နဲ့တစ်ခုလောက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာပဲ နောက်ထပ် ကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ထည့်မလို့ပါ။အဲဒီ့ ကဏ္ဍကို blog ပုံစံလေးလုပ်ချင်တာဗျ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ucsycyber လိုမျိုးလုပ်ချင်တာပါ။ အကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့အစီအစဉ်စဆွဲချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကိုဘီလူးပါ ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်တာပါ။
4 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 3rd November 2009, 6:34 pm
ကို $ƴǩǾ ပြောတဲ့ Test Zone ကိစ္စများလားမသိဘူးဗျာ
5 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 28th November 2009, 12:34 am
ဖိုရမ် လုပ် ပုံလေး ရှင်းပြရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟီ ဟီ ကျွန်တော် တက်ချင်လို့ ။
6 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 28th November 2009, 9:47 am
ဒါပေမယ့် အောင်မြင်အောင် လုပ်ဖို့ရယ် request လုပ်လာသမျှကို ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ကတော့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
7 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 29th November 2009, 12:35 am
8 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 29th November 2009, 7:29 am
9 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 21st February 2010, 9:26 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-02-21
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ကမမ်ဘာ အသစ်ပါခင်ဗျာ နိူင်းဆိုဒ်လေးလဲ လုပ်ထားပါတယ် ရှမ်းဘာသာနဲ့ ရေးပြီး လုပ်ထားတာမို့လင့်မပေးတော့ဘူးနော် ဖတ်မရရင်အားနာလို့ ပါဗျာဒီမှာတောင်းထားတာတွေ့ လို့ ကျနော်လဲစိတ်ဝင်စားလို့ ပါဗျ ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်လေး လုပ်တတ်ချင်ရုံ လေ့လာရုံလေးပါ တတ်နိုင်ရင် အခြေခံကနေ စရေးပေးပါလား တဆင့်ချင်းလိုက်လုပ်ရအောင် ပေါ့ဗျာ ကျနော်ကဘာမှသိသေးတာဟုတ်ဘူးဗျ
ဖိုရမ်တည်ဆောက်နည်းလေး တောင်းဆိုပါရစေဗျာ ဒီမှာတောင်းထားတာတွေ့ လို့ ပါ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မသက်ဆိုင်ခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
10 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 22nd February 2010, 5:33 pm
Local Host မှာ Forum ပြုလုပ်နည်းကတော့ ရှေ့ရှေ့က အစ်ကိုတော်တွေ ရေးသွားတာတွေရှိတယ်။
အိမ်မှာ ပြန်ရှာခဲ့ပေးမယ်။ ကျွန်တော့် ဟာ ကျွန်တော်လည်း ရေးပေးချင်ပေမယ့် အခြေအနေက မပေးဘူးလေ။
11 mouse cursor with myanmar language for ning... how can i do it? on 8th March 2010, 1:59 pm
ning.com မှာ mouse cursor ကို english လိုတော့ ထည့်လို့ရပြီဗျာ...မြန်မာလိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ...
JS နဲ့ရေးထားတာလေးရှိရင် လုပ်ပါဦးဗျာ...မြန်မာလိုသာ ပေါ်လို့ကတော့...ချစ်သူအတွက် တော်ကီတွေ...
mouse အနောက်မှာ လိုက်နေအောင်လုပ်ချင်လို့ပါ...
12 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင် on 15th March 2010, 2:39 pm
zmozmo wrote: ning.com မှာ mouse cursor ကို english လိုတော့ ထည့်လို့ရပြီဗျာ...မြန်မာလိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ...
ဒီဟာအတွက်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ဗျာ..နောက်တခုလောက်မေးချင်တယ်...အဲဒီ ning.com ကို တစ်ခုလုံး backup လုပ်ထားချင်တယ်...ပိုစ့်တွေရော...အားလုံးပေါ့...
[You must be registered and logged in to see this link.] ပါ...
13 Re: ning.com လုပ်ကြရအောင်